Apple Music သည် Star Wars ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည် ငါက Mac ကပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple, Apple ကဂီတ
Apple Music မှာအများကြီးရှိတယ် အသွင်အပြင်ဘူတာနားထောင်သူများသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားတစ်ခုလိုအပ်သည်ဆိုပါကအဖြေတစ်ခုရရှိရန်အမျိုးအစားတစ်ခုကိုသူတို့အလေးထားလေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့် Apple Music ဟာဘူတာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ် 'Star Wars: The Force နိုးထ'ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည်အတိုင်း, ဒီသောကြာနေ့ဖွင့်လှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်။ (ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှစ၍ ကံကောင်းသူအချို့သည်၎င်းတို့အားရွေးချယ်ထားသူအားပြသခြင်းကိုပြသခြင်းကို Premiere တွင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်) ။
ဒီမှာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထဲကထားခဲ့ပါ အမြည်း de 'Star Wars: The Force နိုးထ' လုံးဝစပိန်အတွက်။
အရစ်ကျငွေစက္ကူအသစ်များကိုကြည့်ရှုရန်စီစဉ်သူများအားကူညီရန် Apple Music တွင်ဘူတာအသစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် 'Star Wars' ကျနော်တို့သင်ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့အထူးများ၏၎င်း၏အပိုင်း၌တည်၏။ Star Wars ရုပ်ရှင်မှဂီတ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်များတွင်၎င်း၏အခိုင်မာဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအော်ဒီယိုကိုနှစ်သက်သူများအတွက်မူယခုအခါအက်ပဲလ်သည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာကြားသိစေခဲ့သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းရှိဘူတာအသစ်ကိုရှာရန်၊ ကဏ္ the သို့သွားပါ "Featured ဘူတာ" Apple Music မှာဒီကိုအပ်နှံထားတဲ့ tab ထဲမှာပါ။ ဒါကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် မက် y PCအဖြစ်ပစ္စည်းတွေအပေါ် Apple ကဂီတ iOS ကို နှင့် Apple TV အသစ်။ သင်ထိပ်ပေါ်မှာအချို့ရှိပါက sonos နားကြပ်, ငါသူတို့ယနေ့ Apple Music နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းယနေ့ငါပြောပြသည်သကဲ့သို့, သင်အများကြီးပိုပြီးထိတ်လန့လိမ့်မည်။ Star Wars ကနေထွက်ခွာလာတာနဲ့အမျှဒီသောကြာနေ့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်၊ ငါအရင်6ရုပ်ရှင်ကြည့်နေပါတယ်
Star Wars ရဲ့ Premiere ကိုကြည့်မလား။. သငျသညျရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ရုပ်ပြအတွက်နှစ် ဦး စလုံးတည်ရှိခဲ့ကြသောအကောင်းဆုံး Saga တစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်ပါသလား.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကဂီတ » Apple Music သည် Star Wars ကိုတိုးပွားစေသည်